Nakaton’i Kyrgyzstan Noho Ny Antony “Mahery Fihetsika” Ny Archive.org. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Jolay 2017 5:01 GMT
Nilaza ny Internet Archive (archive.org) fa efa nahatahiry pejy habaka efa ho 300 miliara tao anatin'ny roapolo taona mahery izy. Mitahiry ireo boky sy mozika azo ampiasaina maimaim-poana ihany koa izy.
Eny tokoa, nohavaozina hatrany ny Internet Archive amin'ny fampiasana fitaovana ara-teknika izay misandrahaka amin'ny aterineto manerantany ary maka ny sarin'ireo tranonkala manerana ny tambajotra. Ity fomba fiasan'ny archive.org, izay antsoina hoe Wayback Machine ity dia mahasoa ho an'ny mpanao gazety sy mpikatroka manao fanadihadiana ny zavatra lasa nataon'ny orinasa sy ny olo-malaza manerana izao tontolo izao, anisan'izany ny ao Kyrgyzstan, izay laharana faha 136 amin'ireo orinasa 176 tao anatin'ny tatitra momba ny Fahitàna ny Kolikoly avy amin'ny Transparency International.
Nankatò ny lalàna iadiana amin'ny extremisma ny parlemanta Tajik tamin'ny 13 Jolay, lalàna izay ahafahan'ny sampam-piarovana hanan-jo hanaramaso tranonkala notsidihana sy ireo fanehoan-kevitra ataon'ny olom-pirenena any anaty aterineto. Saingy tsy mikasika ny rafitra izay ho ampiasaina hanaraha-maso ny fampiasana aterineto ny fifanakalozan-kevitra tao amin'ny antenimiera. Tsy mbola nivoaka ho an'ny be sy ny maro ny lahatsoratry ny volavolan-dalàna.
Tajikistan 3 andro izay
Tsy raharahaina, tsy ilaina, tsy omena famelàna
Azerbaijan 3 herinandro izay
Nakaton'ny fampanoavana Tiorka ny raharaham-pahafatesan'ilay mpikatroka Azerbaijaney, Bayram Mammadov